Astra Theme Pro Bundle – The Well Finisher
Astra Theme ဟာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ WordPress Themes တွေထဲမှာ လက်ရှိအသုံးပြုမှု (Active Installations) တစ်သန်းကျော်နဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ WordPress Theme တခု ဖြစ်ပါတယ်။ Astra Theme ဟာ ဘာတွေမှာ အားသာချက်ရှိပြီး ကောင်းတာလဲ?
WordPress ကို အသုံးပြုပြီး ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တည်ဆောက်ကြသူများ အနေနဲ့ Themes တွေနဲ့ မစိမ်းကြပါဘူး။ ဘယ် theme က ကောင်းမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကလဲ.. ဒါပုံမှန် မေးနေကျ မေးခွန်းတခုပါ။ စီးပွါးရေး၊ ပညာရေး (Learning Management System – LMS)၊ အွန်လိုင်းစတိုး (Online Store/ Shop)၊ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ (Personal Blog)၊ အိမ်ယာရောင်းဝယ်ရေး (Property Agency)၊ ဟော်တယ်လုပ်ငန်း (Hotel, Tourism)၊ သတင်းလုပ်ငန်း (News & Information) .. စသည်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီးပွါးရေးနဲ့ လုပ်ငန်းသဘောအရ အမျိုးအစားများစွာ ‌ရွေးချယ်စရာ ရှိပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ Theme တခုဟာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တခုရဲ့ ပင်မ ဒီဇိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ (design layout) အပြင် SEO (Search Engine Optimization)၊ မြန်ဆန်ပေါ့ပါးမှု (Speed) နှင့် လွယ်လင့်တကူ စိတ်ကူးရှိသလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှု (Customization Options) တို့ကိုပါ အဓိကထား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
WordPress Theme တခု ဘယ်လောက်ကောင်းအောင် တည်ဆောက်ထားသလဲ (Well-built) ဆိုတာကို အောက်ပါ အင်္ဂါရပ် (Feature) တချို့နဲ့ ချိန်ထိုး သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
ယေဘုယျ ဒီဇိုင်းနဲ့ စတိုင် [ (Overall design and styling (Header, Footer, and Sidebar, etc.) ]
စာလုံးစတိုင် (Font style)
အရောင်ရွေးချယ်မှု (Colors or Color Palette)
Widget တွေရဲ့ တည်ရှိမှု (Locations)
စာမျက်နှာများရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု (Page layouts or templates)
စာရေးသားဖို့ ဘလောဂ်ပုံစံ (Styles for blog posts and blog archives)
အခြားသော ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ Plugin များ အသုံးပြုနိုင်မှု (Compatibility with additional tools)
Astra ဟာ နာမည်ကျော် Elementor နဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အဆင်ပြေမှု ရှိပါတယ်။ Astra ကို Elementor နဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် စိတ်ကူးရှိသလောက် ဒီဇိုင်းပုံစံ အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Astra ရဲ့ အားသာချက် တချို့ကတော့၊
100% Elementor Compatibility ရှိတဲ့အပြင် အခြားသော Page Builder တွေဖြစ်တဲ့ Gutenberg, Beaver Builder, နဲ့ Brizy တွေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Free နဲ့ Premium Starter Templates စုစု‌ပေါင်း ၁၈၀ ကျော် အဆင်သင့် ပါရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Special Integrations အနေနဲ့ Woocommerce, LifterLMS, Learndash, Toolset, Yoast စတာတွေ အပြင် အခြား Learning Management System များနဲ့ Booking System များနဲ့လဲ ကောင်းစွာ တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
Conversion အတွက် Feature ကြွယ်ဝပြီး အသုံးပြုရ လွယ်ကူတဲ့ Convert Pro Plugin က Astra နဲ့ အတူတူ ပါလာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Search Engine Optimization အတွက် အရေးပါတဲ့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ SEO Plugin များကို ထပ်ဝယ်စရာမလိုပဲ Astra ရဲ့ ကိုယ်ပွါးအခု အဖြစ် Schema Pro Plugin က ပါလာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Elementor နဲ့ Beaver သုံးသူများအတွက် Ultimate Addons for Elementor နဲ့ Ultimate Addons for Beaver Builder တို့ အလိုအလျောက် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Astra Pro Bundle မသုံးဘူးဆိုရင် အဲဒီ Plugin တွေက သူတို့ကို သီးသန့် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကျော် ပေးရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဈေးနှုန်းက တခုချင်းသီးသန့် ဝယ်ရင် ဒေါ်လာ ၂၀၀ တန်ဖြစ်ပြီး ဒီနေရာမှာ ဝယ်ရင် ဒေါ်လာ ၃၀ သာပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဘာကြောင့်ဈေးသက်သာတာလဲ?)